နယူးကာဆယ်နဲ့ ပွဲမတိုင်ခင် မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho နဲ့ အင်တာဗျူး
5 Oct 2018 . 6:25 PM
နယူးကာဆယ်နဲ့ ပွဲမတိုင်ခင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho ရဲ့ အင်တာဗျူးကို Manchester Evening News ကအခုလိုဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
မေး – မန်ယူအသင်းမှာ ခင်ဗျားရဲ့ ကစားသမားတွေအပေါ်ချမှတ်တဲ့ နည်းစနစ်တွေ ဘာလို့အလုပ်မဖြစ်တာလို့ ထင်ပါသလဲ ?
ဖြေ – မတူညီ ခြားနားတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
မေး – ဒီအကြောင်းပြချက်တွေကို ပြောပြပေးနိုင်မလား ?
ဖြေ – မပြောပြနိုင်ပါဘူး။
မေး – ခင်ဗျားရဲ နည်းပြဘ၀အစထဲက အိမ်ကွင်းစွမ်းဆောင်ရည်မှတ်တမ်းဟာ တကယ့်ကိုကောင်းမွန်ခဲ့ပါတယ်။ အခု နယူးကာဆယ်နဲ့ ကစားမယ့်အိမ်ကွင်းပွဲဟာ ဘယ်လောက်ထိအရေးပါနေပါသလဲ ?
ဖြေ – တကယ့်ကို အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီပွဲဟာ အောက်တိုဘာလအစမှာပါ။ ဒါကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့က ဥရောပတစ်လွှားက အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ အမှတ်ပေးဇယားတွေကို ကြည့်နေကြပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ လက်ရှိရပ်တည်မှုနဲ့ စက်တင်ဘာ ၊ အောက်တိုဘာ ရပ်တည်မှုတွေဟာ ရာသီကုန်မှာ ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကို မသိနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပြီး ရမှတ်တွေလိုအပ်နေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ်(၂)ပွဲရဲ့ရမှတ်(၆)မှတ်မှာ (၁)မှတ်ပဲရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းက တိုးတက်ဖို့လိုနေပြီး အနိုင်ရမှတ်(၃)မှတ်လိုအပ်ပါတယ်။ နယူးကာဆယ်အသင်းမှာ နည်းပြကောင်းရှိပြီး ထိပ်သီးအသင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံရင်လည်း ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အတွက် ခက်ခဲတဲ့ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
မေး – လက်စတာကို နိုင်တဲ့ပွဲပြီးထဲက အသင်းကအိမ်ကွင်းနိုင်ပွဲမရှိတော့ဘူး။ လက်ရှိအချိန်က အသင်းပရိသတ်တွေကို ပြန်ပေးဆပ်ရမယ့် အချိန်ရောက်ပြီလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
ဖြေ – ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကမှန်ပါတယ်။ ဒီရာသီအိမ်ကွင်းမှာ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲပဲရပါသေးတယ်။ စနေနေ့ မှာကစားမယ့် ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။
မေး – ခင်ဗျားက နောက်ဆုံး(၄)ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပျောက်ထားတယ်။ ကလပ်အသင်းက ၁၉၉၉ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း (၅)ပွဲဆက် နိုင်ပွဲပျောက်ခဲ့တာ တစ်ခါပဲရှိခဲ့တယ်။ ကလပ်အသင်းရဲ့ လက်ရှိအနေအထားဟာ လုံလောက်မှုမရှိဖူးဆိုတာကို ခင်ဗျားလက်ခံပါသလား?
ဖြေ – လက်ခံပါတယ်။
မေး – ပြီးတော့ အခုလက်ရှိအခြေအနေဆိုးကို ခင်ဗျားကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ ပရိသတ်တွေက ယုံကြည်နေကြတယ်။ အဲ့အတိုင်း ခင်ဗျားလုပ်ပြနိုင်မလား ?
ဖြေ – မော်ရင်ဟို ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိ။
Photo: 0News , Kandanda
နယူးကာဆယျနဲ့ ပှဲမတိုငျခငျ မနျယူနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho နဲ့ အငျတာဗြူး
နယူးကာဆယျနဲ့ ပှဲမတိုငျခငျပွုလုပျခဲ့တဲ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ မနျယူနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho ရဲ့ အငျတာဗြူးကို Manchester Evening News ကအခုလိုဖျောပွပေးခဲ့ပါတယျ။
မေး – မနျယူအသငျးမှာ ခငျဗြားရဲ့ ကစားသမားတှအေပျေါခမြှတျတဲ့ နညျးစနဈတှေ ဘာလို့အလုပျမဖွဈတာလို့ ထငျပါသလဲ ?
ဖွေ – မတူညီ ခွားနားတဲ့ အကွောငျးပွခကျြတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။
မေး – ဒီအကွောငျးပွခကျြတှကေို ပွောပွပေးနိုငျမလား ?
ဖွေ – မပွောပွနိုငျပါဘူး။
မေး – ခငျဗြားရဲ နညျးပွဘဝအစထဲက အိမျကှငျးစှမျးဆောငျရညျမှတျတမျးဟာ တကယျ့ကိုကောငျးမှနျခဲ့ပါတယျ။ အခု နယူးကာဆယျနဲ့ ကစားမယျ့အိမျကှငျးပှဲဟာ ဘယျလောကျထိအရေးပါနပေါသလဲ ?
ဖွေ – တကယျ့ကို အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီပှဲဟာ အောကျတိုဘာလအစမှာပါ။ ဒါကိုကြှနျတျောသိပါတယျ။ ခငျဗြားတို့က ဥရောပတဈလှားက အမှတျပေးပွိုငျပှဲတှရေဲ့ အမှတျပေးဇယားတှကေို ကွညျ့နကွေပါတယျ။ ပွိုငျပှဲတှရေဲ့ လကျရှိရပျတညျမှုနဲ့ စကျတငျဘာ ၊ အောကျတိုဘာ ရပျတညျမှုတှဟော ရာသီကုနျမှာ ဘာဖွဈမလဲဆိုတာကို မသိနိုငျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ အကောငျးဆုံးစှမျးဆောငျသှားရမှာဖွဈပွီး ရမှတျတှလေိုအပျနပေါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ(၂)ပှဲရဲ့ရမှတျ(၆)မှတျမှာ (၁)မှတျပဲရယူနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အသငျးက တိုးတကျဖို့လိုနပွေီး အနိုငျရမှတျ(၃)မှတျလိုအပျပါတယျ။ နယူးကာဆယျအသငျးမှာ နညျးပွကောငျးရှိပွီး ထိပျသီးအသငျးတှနေဲ့ တှဆေုံ့ရငျလညျး ဒုက်ခပေးနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အတှကျ ခကျခဲတဲ့ပှဲဖွဈလာနိုငျတယျလို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။
မေး – လကျစတာကို နိုငျတဲ့ပှဲပွီးထဲက အသငျးကအိမျကှငျးနိုငျပှဲမရှိတော့ဘူး။ လကျရှိအခြိနျက အသငျးပရိသတျတှကေို ပွနျပေးဆပျရမယျ့ အခြိနျရောကျပွီလို့ ကြှနျတျောထငျတယျ။
ဖွေ – ဟုတျပါတယျ။ ဒါကမှနျပါတယျ။ ဒီရာသီအိမျကှငျးမှာ နိုငျပှဲတဈပှဲပဲရပါသေးတယျ။ စနနေေ့ မှာကစားမယျ့ ပှဲမှာအနိုငျရဖို့ ကြှနျတျောတို့အတှကျ အရေးကွီးပါတယျ။
မေး – ခငျဗြားက နောကျဆုံး(၄)ပှဲဆကျနိုငျပှဲပြောကျထားတယျ။ ကလပျအသငျးက ၁၉၉၉ ခုနှဈနောကျပိုငျး (၅)ပှဲဆကျ နိုငျပှဲပြောကျခဲ့တာ တဈခါပဲရှိခဲ့တယျ။ ကလပျအသငျးရဲ့ လကျရှိအနအေထားဟာ လုံလောကျမှုမရှိဖူးဆိုတာကို ခငျဗြားလကျခံပါသလား?
ဖွေ – လကျခံပါတယျ။
မေး – ပွီးတော့ အခုလကျရှိအခွအေနဆေိုးကို ခငျဗြားကြျောဖွတျနိုငျတယျလို့ ပရိသတျတှကေ ယုံကွညျနကွေတယျ။ အဲ့အတိုငျး ခငျဗြားလုပျပွနိုငျမလား ?
ဖွေ – မျောရငျဟို ပွနျလညျဖွကွေားခွငျးမရှိ။